Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Amalungelo abantu » Inkululeko ekwi-Intanethi iyancipha kakhulu kunyaka we-11th ngokulandelelana
Iindaba zeBelarus Breaking • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase China eziQhekezayo • ulwaphulo-mthetho • inkcubeko • Education • Iindaba zase-Egypt eziQhekezayo • ukonwatyiswa • Imiboniso bhanya bhanya • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Amalungelo abantu • Iindaba zase-Iceland zokuPhula • LGBTQ • umculo • Iindaba zaseMyanmar • iindaba • abantu • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziVuthayo zaseVietnam
Lilonke, ubuncinci amazwe angama-20 athintele ukufikelela kwabantu kwi-Intanethi phakathi kukaJuni 2020 noMeyi 2021, ixesha eligutyungelwe luvavanyo.
Abasebenzisi be-Intanethi kwihlabathi liphela bajongana nokuphathwa gadalala, ukubanjwa kunye nokuhlaselwa ngokwasemzimbeni ngenxa yomsebenzi wabo we-Intanethi.
Inkululeko yengxelo yeNet inika amazwe amanqaku ali-100 kwinqanaba lenkululeko ye-Intanethi eyonwatyelwa ngabemi.
Ngo-2021, abasebenzisi bajamelana nokuhlaselwa ngokwasemzimbeni ukuziphindezela kwizithuba zabo ezikwi-Intanethi kumazwe angama-41.
Inkululeko ekwi-Intanethi iyancipha kwihlabathi liphela kunyaka we-11 ngokulandelelana, ngokwengxelo yonyaka "yeNkululeko kwiNet", epapashwe namhlanje.
Ukupeyinta umfanekiso ombi wenkululeko yedijithali ngo-2021, ingxelo yathi abasebenzisi be-Intanethi kwinani elikhulayo lamazwe bajongene nokuhlukunyezwa, ukuvalelwa, ukutshutshiswa ngokwasemthethweni, ukuhlaselwa ngokwasemzimbeni kunye nokufa ngenxa yemisebenzi yabo ekwi-Intanethi kunyaka ophelileyo.
Ingxelo ithi ukuvalwa kwe-Intanethi eMyanmar naseBelarus kubonise amanqaku aphantsi kwimeko yokuphazamisa inkululeko yokuthetha kwi-Intanethi.
Ihlanganiswe yitanki yokucinga ye-Freedom House yase-US, ingxelo inika amazwe amanqaku ali-100 kwinqanaba lenkululeko ye-Intanethi eyonwatyelwa ngabemi, kubandakanya nendlela abajamelana ngayo nezithintelo kumxholo abanokufikelela kuwo.
Eminye imiba ibandakanya ukuba ngaba i-pro-government trolls ifuna ukukhohlisa iingxoxo ezikwi-Intanethi.
"Kulo nyaka, abasebenzisi bajongene nokuhlaselwa ngokwasemzimbeni ukuziphindezela kwimisebenzi yabo ye-Intanethi kumazwe angama-41," yatsho ingxelo, "irekhodi eliphezulu" okoko ukulandelwa kwaqala kwiminyaka eli-11 eyadlulayo.
Imizekelo ibandakanya umfundi waseBangladeshi walaliswa esibhedlele emva kokubethwa "kwezenzo ezichasene norhulumente" kwimidiya yoluntu, nentatheli yaseMexico yabulawa emva kokuthumela ividiyo kaFacebook etyhola iqela lokubulala.
Kwakhona, abantu babanjiwe okanye bagwetywa ngenxa yemisebenzi yabo ye-Intanethi kumazwe angama-56 kumazwe angama-70 agutyungelwe yingxelo-irekhodi lama-80 epesenti.
Babandakanya abaphembeleli ababini base-Egypt abagwetywe ngoJuni ngenxa yokwabelana ngeevidiyo zeTikTok ezikhuthaza abantu basetyhini ukuba benze ikhondo lomsebenzi kumaqonga eendaba ezentlalo.